Fivoaran'ny teknolojia momba ny fakan-tsary amin'ny vatana mandritra ny taona | Vahaolana OMG
Amin'ireo gadra elektronika maro izay ampiasainay isan'andro, ny fakantsary dia tsy isalasalana fa isan'ny malaza indrindra. Avy amin'ny finday mankany amin'ny solosaina mankany amin'ny rafitra fiarovana amin'ny trano dia manana fakantsary bitany ny zava-drehetra. Raha ny zava-dehibe amin'ny fakan-tsary dia ny fandraisam-peo ny zavatra be mpitia indrindra na zavatra izay mahaliana antsika, ny sasany kosa dia natao hanaovana asa manokana. Ny ohatra voalohany dia ny cam-cam, na ny fakan-tsary izay nitazona na mitazona mafy ny vatana.
Araka ny lazain'ny anarana, ny cam-cam dia namboarina hapetraka amintsika. Ireo mpampiasa izay tena mampiasa azy ireo dia polisy amerikanina na mpiasan'ny lalàna, izay mampiasa azy ireo handrakitra ireo porofo sy fijoroana ho vavolombelona. Ny fakantsary hetsika dia karazana fakantsary hafa izay mety anaovana amin'ny vatana ary ahafahanao mirakitra hetsika manokana an'ny tena manokana. Izany no mahatonga azy ireo ho tsara indrindra amin'ny fanaovana bilaogy video na ny fitifirana fanatanjahan-tena.
Nandritra izay taona maro lasa izay, ny teknolojia ampiarahina amin'ny fanavaozana sy ny fandrosoana eo amin'ny sehatry ny polisy sy ny fiarovana dia namaritra ny lafiny maro amin'ny polisy sy ny serivisy fiarovana. Ny fahitana indrindra ny teknolojia ho fanitarana ny lalàna mifehy ny lalàna mba hampiasa herisetra (toy ny fampiasana TASER) - toy ny fitsapana ADN (Roman, 2008) - ary koa ny mekanika hanatsarana ny fahombiazan'ny serivisy natolotry ny polisy mifandraika amin'ny fikarohana heloka bevava miaraka amin'ny maodelin'ny polisy mialoha (Intelligence-Led) - Policing) sy ny fampahalalana vaovao (toy ny fanadihadiana momba ny Hot Spots izay nataon'ny CrimeView tamin'ny alàlan'ny rafitry ny fampahalalana polisy Pol).
Ny teknolojia koa dia nanjary nampiasaina ho rafitra fanaraha-maso sy fanaraha-maso ataon'ny olom-pirenena tsotra sy ny polisy. Tany am-piandohan'ny taona 1990 tany amin'ny polisy amerikana isan-karazany dia nipoitra ny fakan-tsarimihetsika fakantsary fakan-tsarimihetsika anaty fiara ho fomba vaovao handraketana ny fifandraisana eo amin'ny polisy sy ny sivily (Pilant, 1995).
Na eo aza ny fanoherana tany am-boalohany nomen'ny mpitandro ny filaminana tamin'ireto fakantsary ireto (Pilant, 1995), ny fikarohana dia naneho fa nitombo ny fahatsapana fiarovana izay tsapan'ny polisy fa mahavita ny andraikiny, mitombo ny fandraisana andraikitra ary ny fangaraharana amin'ny asan'ny polisy ihany koa. ary mampihena ny mety ho andraikitry ny polisy. Vokatr'izany dia nanaiky tanteraka izany teknôlôjia izany ary nampiakan'ny manampahefana amerikana (IACP, 2003).
Amin'ny lafiny iray, ny rafitra CCTV dia niha-malaza teo amin'ireo tompon'andraikitra isan-karazany teo an-toerana sy ny fampiharana ny lalàna satria nanome fomba fijery roa fanaraha-maso sy fisorohana tena lehibe, toy ny fisorohana ny heloka bevava amin'ny ankapobeny ary ho fitaovana fanadihadian'ny polisy.
Mazava ho azy, ny fihanaky sy ny fihanaky ny finday (izay manana horonan-tsary sy fakantsary audio miorina) amin'ny vanim-potoana maoderina nomerika koa dia nampitombo ny fahafahany mirakitra ireo zava-mitranga rehefa misy azy ireo, indrindra mandritra ny fifandraisan'ny polisy sy ny olom-pirenena. Vokatr'izany, horonantsary sy fandraisam-peo dia nanjary ampahany be amin'ny fiainana 21 taonjato tamin'ny taonjato voalohany.
Inona no atao hoe Cameras-BWC?
Ny fivoarana farany ara-teknolojia eo amin'ny sehatry ny fampiharana ny lalàna eo amin'ny sehatry ny fanaraha-maso dia misy ny fakan-tsary napetraky ny polisy sy ny mpiambina tsy miankina mandritra ny serivisy iray (cameras de bureaux-n'ny polisy). Ny teknolojia fampiasana ireo fakantsary ireo dia tena tsotra ary hazavaina ao aoriana kely.
Ny fakantsary nentin'ny polisy na mpiambina (izay fitaovana kely afaka mirakitra sary sy feo) dia mirakitra ny fifandraisany sy ny fifandraisan'ny polisy na mpiambina miaraka amin'ny olom-pirenena iray, niharam-boina na nahavanon-doza. Ny horonantsary sy horonantsary nalain'ny fakantsary portable dia ampiasain'ny tompon'andraikitra misahana ny fiarovana sy ny serivisy mba hanomezana fangaraharana eo amin'ny fifandraisan'izy ireo amin'ny fiarahamonim-pirenena ary izy ireo no tompon'andraikitra amin'ny farany.
Ahoana ny fiasan'ny fakan-tsary portable?
Ity teknolojia ity dia mampiasa fakan-tsary miorina amin'ny vatan-kazo na vatan'ny polisy na mpiambina. Ny fakantsary azo entina dia azo antoka amin'ny tadiny avy any amin'ny tendan'ny polisy na raikitra ao am-paosy na amin'ny vozon'akanjon'ny fanamiana polisy. Mety ampidirina anaty solomaso mitafy ny polisy aza. Amin'ny ankapobeny, na izany aza, ny fakantsary azo entina dia apetraka amin'ny toerana avo kokoa amin'ny vatana mba hanomezana sary tsara rehefa maka horonantsary sy feo.
Ity teknôlôjia ity dia afaka maka sary mametaka horonantsary sy feo. Io dia mamela azy handrakitra izay hitan'ny tompon'andraikitra mandritra ny fifandimbiany ary noho izany dia mirakitra ny hetsika rehetra atao eo alohany sy amin'ny olona hifandraisany aminy. Ny fahaizana fandraisam-peo dia mety voafetra ao anatin'ny ora vitsivitsy hatramin'ny ora 14. Betsaka ny fakan-tsary azo tsapain-tanana samihafa ampiasain'ny fanamiana polisy, ao anatin'izany ny Panasonic, VIEVU, TASER International, WatchGuard, ary orinasa Wolfcom. Ny vidin'ny fakantsary tahaka izany dia mety ho $ 200 ka $ 1000, izay eo amin'ny $ 185 ka $ 925.
Ny fakantsary finday dia mety misy safidy marobe, toy ny fanaraha-maso isan-karazany amin'ny fakan-tsary isan-karazany, toy ny fanindriana ny bokotra firaketana, ny fanaraha-maso amin'ny efijery, ny horonan-tsary ary ny fandefasana horonantsary sy ny fahaizan-dahatsary, ary ny lalao miverina amin'ny alàlan'ny efijery izay azo atambatra. . Ny rakitsary fakana horonantsary alaina amin'ny fakantsary dia alaina amin'ny alàlan'ny fakan-tsary amin'ny fitaovana fitehirizana eo an-toerana (ohatra mpizara eo an-toerana amin'ny tamba-jotra anatiny) na amin'ny alàlan'ny sehatra fitahirizam-baovao nomerika miorina amin'ny Internet, izay ahafahana angon-drakitra sy azo tantanana. Ny modely sasany koa dia mamela ny horonantsary arakaraky ny mpitandro ny filaminana efa eo am-panaovana hetsika.
Ny haitao amin'ny fampiasana fakantsary azo entina dia misy singa maro, izay tsy mitovy amin'ny mpamokatra fakantsary isan-karazany toy ny efa voalaza. Ohatra, ny rafitry ny TASER International antsoina hoe AXON dia misy-
Fakantsary kely tao anaty fanamiana polisy (na amin'ny satroka na lobaka na solomaso) izay manoratra izay hitan'ny polisy,
Fitaovana kely (ohatra, Smartphone laptop) izay itahirizana ny rakitsary; ary
Batterie maharitra mandritra ny ora 12 ka hatramin'ny 14 ary misy fantsom-pahefana fakantsary ahafahan'ny fakantsary maka sary ny polisy araka izay sitrapony.
Ny rafitra AXON dia miaraka amina serivisy fitahirizana angon-drihana misy ao amin'ny polisy na ny mpiasan'ny polisy na ny mpiasan'ny famaranana ny tranokala ary avy eo ny serivisy fitahirizam-bidy amin'ny lafiny iray, ny rafi-pandaharana VIEVU mitondra ny fakan-tsary VIEVU dia rafitra tsy miankina. fitaovana mifangaro izay entin'ny mpitandro filaminana mitondra ny vatany izay misy horonantsary sy fakantsary ary fifindrana miorina amin'ny rahona sy fitehirizana angon-droa.
Amin'ny lafiny iray, ny VIEVU mitondra ny fakan-tsary dia rafitra tsy miankina izay ampiasain'ny polisy ho an'ny vatan'izy ireo izay misy sary mihetsika sy fakantsary ary fifindrana miorina amin'ny rahona sy fitahirizana angon-drakitra.
Fanaovana teknolojia momba ny fakan-tsary amin'ny vatana mandritra ny taona maro no farany niova: Desambra 2nd, 2019 by Admin
4566 Total Views 3 Views Today